Knowledge Archives - Khitalin Media
ကိုယ့်နား မှာ အဲ့လိုမျိုး အပေါက်လေးပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ(ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ)
January 26, 2022 by Khitalin Media
ကိုယ့်နား မှာ အဲ့လိုမျိုး အပေါက်လေးပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ(ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ) သင့်ရဲ့ နားရွက် ဝန်းကျင်မှာ သဘာဝ အတိုင်း မွေးရာပါ အပေါက်လေးပါနေရင် အင်မတန်မှ ရှားပါတဲ့သူဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူ လိုက်ပါတော့၊ ဒါပေမယ့် ဒီအပေါက်လေးက အန္တရာယ်လည်း ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလို နားရွက်နားမှာ အပေါက်ပါသူတွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး လူဦးရေနဲ့ဆိုရင် ၂% လောက်သာ ရှိတာကြောင့် အလွန်ထူးခြား သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံအခေါ်အဝေါ်အရ နားတွင်းပေါက်ငယ် လို့ သိထားတဲ့ အပေါက်လေးဟာ နားရွက်ရဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ များသောအားဖြင့် နားရွက်နဲ့ မျက်နှာကြားမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ၁၈၆၄ ခုနှစ်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သုတေသနစာတမ်းအရ ဒီအပေါက်ငယ်လေးဟာ သန္ဓေသား ၆ ပတ်၊ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်နေဆဲအချိန်မှာ စဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီး အပေါ်ယံကနေ အရိုးနုအမြှေးပါးထိ … Read more
အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ ဆံံပင်ဖြူနေရင် လုပ်သာကြည့်လိုက်ပါ ဆံံပင်တွေပြန်နက်ကုန်ပြီးတဲ့ ဆံဖြူသူတို့ ဆံကေသာြ ပန်မနက်ေ တာ့ဘူးဆိုရင် စိတ်တွေပဲ ထိုင်ညစ်မနေပါနဲ့… နည်းလမ်းလေးရှိပါ တယ်… ပင်ကိုယ်ဗီဇ အနက်ရောင်ရှိတဲ့ နတ်သစ်ရွက်က ဦးဆောင် သွားမှာပါ။ အဲ့ဒါက လက်ဖက်ခြောက်ပါပဲ လက်ဖက်ခြောက်ကို မီးနဲ့ ကျွတ်အောင်လှော်ပါ။ နောက်တစ်ခုက သိပ်အရေးကြီးတဲ့ ကြိတ်မှန်ရွက်ကို သိဖို့ိလိုပါတယ်။ ဆံပင်ပြန်နက်ဖို့ သူ့ရဲ့အကူအညီ ကလည်း လိုတာကိုး။ ကြိတ်မှန်ရွက်က မသိလို့သာရှား တာပါ။ အလေ့ကျလမ်းဘေးေ ပါက်တာပဲ။ ကြိတ်မှန်ရွက်ကို နေရိပ်မှာလှန်း ခြောက်ရင် လက်ဖက်ခြောက် အလှော်မှုန့်(၃)ဆ ၊ ကြိတ်မှန်ရွက် အခြောက်မှုန့်(၁) ဆကို အုန်းဆီစစ်စစ်နဲ့ ရောဖျော်ပြီး နေတိုင်းလိမ်းပေး။ (မပျစ်မကျဲ အုန်းဆီစစ်စစ် နှင့်စပ်ပါရန်) ဆံံပင်တွေပြန်နက်တာ ဟုတ်ပမလာ းတော့ မမေးနဲ့ လက်ဖက်ခြောက် … Read more
အမေကိုချစ်တဲ့သားဟာ မယားမချစ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ငါ့သား အမေနဲ့မိသားစုကိုလဲချစ်ပါ မိခင်မျိုးနွယ်ဝင်ဇနီးသည်ကိုလဲချစ်ပါ..အမေ့အတွက်သားကောင်း အစ်မညီမအတွက် မောင် ကောင်း၊ အစ်ကိုကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ဇနီးသည်ကို မကောင်းဘူး ဆိုတာမျိုး မဖြစ်စေနဲ့ကွဲ့ မိသားစုကိုချစ်သလို ဇနီးသည်ကိုချစ်ပေး ပါ….. မိဘအိမ် မောင်နှမအိမ် ဇနီးသည် မသိဘဲမသွားနဲ့ငါ့သား သူတို့မိသားစုတွေ ငါ့ကွယ်ရာ ငါ့ယောက်ျားကိုဘာသွေးထိုးနေပါ လိမ့်လို့ သူ့ဖက်ကအမြင်မျိုးဖြစ်စေတတ်လို့ တတ်နိုင်ရင် ငါ့သားမိသားစုဆီသွားရင် ဇနီးကိုခေါ်သွားကွဲ့ မလိုက်တာတော့သူ့အပိုင်းပေါ့ ခေါ်ပါရဲ့နဲ့မလိုက်ပဲ စကားနာထိုးတာ သွေးထိုးတာလဲလက်မခံနဲ့ငါ့သား မိသားစုနဲ့ဇနီးသည်ကြား သမာသမတ်ကျကျ မျှမျှတတဖြစ်ပါစေ…။ ငါ့လုပ်စာပဲ ငါ့မိဘ မောင်နှမ ပေးတာ မိန်းမပြောစရာမလိုဘူး မထင်နဲ့ငါ့သား အမှားကြီးမှားမယ် အမေကမွေး အမေပြုစုယုယပေးပေမယ့် အိမ်ထောင်ကျရင်အမေ မပိုင်ဘူး ငါ့သားလေးရဲ့…. မိန်းမ မသိအောင်ခိုးပေးခြင်းဟာ အမေ့သိက္ခာထိခိုက်သလို ချွေးမ အနေနဲ့ကြည့်ရင် သူ့မာန ထိခိုက်စေတယ် ငါ့သားလေး ရဲ့.. … Read more
ခုခေတ်လူငယ် အများစု အရှက် အကြောက်တရားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တလွဲ ဆံပင် ကောင်းနေကြတယ်။ ရှက်ရ ကြောက် ရမယ် ဆိုတာ ဘာကို ရှက်သင့်လို့ ဘာ‌ကိုကြောက် ရမှန်း မသိရှာကြပေ။ ကိုယ်တွေ့ ကြုံရ သလောက် ပြောရရင် မိဘကို အာခံပြီး တုန့်ပြန်ရမှာ ကို ကျတော့ မရှက် မကြောက် မိဘကို ကိုယ်လုပ်မိ တဲ့ အမှား ဝန်ချတောင်းပန် ရမှာ ၊ ကျေးဇူ းဂုဏ်ကို ရှိခိုး ရမှာတော့ ရှက်ကြ ကြောက်ကြ တယ်။မိဘကွယ်ရာမှာ ရည်းစား နဲ့ အလေ လိုက်လို့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေပြီး မိဘကိုတော့ မသိအောင် လိမ်ကြ ညာကြ ရတာ မရှက်ကြ မကြောက်ကြ၊ အကြောင်းအကျိုး … Read more
Unicode လူအများစု သတိမထားမိတဲ့ ညဘက် မီးဖွင့်အိပ်ခြင်းရဲ့ အန္တရာယ် (၅) ခု မီးဖွင့်ပြီးအိပ်တာနဲ့ မီးပိတ်ပြီး အိပ်တာရဲ့ကြားမှာ ကွာခြားချက်တော့ ရှိပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတော့ မီးဖွင့်ပြီး အိပ်တာကိုမှ သဘောကျပါလိမ့်မယ်။ မီးဖွင့်အိပ်တဲ့အခါ သရဲ မလာနိုင်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုး။ ဒါပေမယ့် မီးဖွင့်အိပ်တဲ့အခါ နောက်ကွယ် မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ၁။ မျိုးပွားကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေခြင်း=ညဘက်မှာ မီးဖွင့်အိပ်ခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးမပွားနိုင်တော့တဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း လေ့လာချက် တစ်ခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကြွက်လေးတွေကို မီးဖွင့်ထားတဲ့ အခန်းမှာ ညဘက် အိပ်ခိုင်းတဲ့အခါ မျိုးမပွားနိုင်တော့တာကို လေ့လာတွေ့ရှိ ခဲ့ကြပါ တယ်။ ညဘက်မှာ အလုပ် လုပ်ရတာများတဲ့ သူနာပြု အမျိူးသမီးတွေမှာ ရာသီစက်ဝန်း မမှန်တော့တာတွေ့ရကြောင်း နောက်ထပ် … Read more
NASA ရဲ႕ၿဂိဳလ္တုကေန ဖမ္းယူရရွိခဲ့တဲ့ပုံေတအရ အလြန္ကိုဆန္းၾကယ္တဲ့ေရကန္နီတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရကန္ရဲ႕အေရာင္အရ အနီးေရာင္ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ သဘာအေလွ်ာက္ျဖစ္ေပၚေနတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ chemicalေတြ ဓာတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ထင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေရကန္ရဲ႕ဆန္းၾကယ္မႈက ဒါေတြတင္မဟုတ္ဘဲ ေဒသခံေတြရဲ႕ေျပာျပခ်က္ရအရ ဒီေရကန္နဲ႔ထိေတြ႕လိုက္တဲ့ အရာတိုင္းဟာ ေက်ာက္႐ုပ္ျဖစ္သြားတယ္လိူ႔ေျပာၾကပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေဒသခံေတြဟာ အဲ့ေရကန္နားကိုမသြားၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရကန္ကို ဂရိနတ္ဘုရားရဲ႕အမ ည္ကိုအစြဲျပဳၿပီး မယ္ဒူဇာရဲ႕ေရကန္လို႔ အမည္မည့္ထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ မယ္ဒူဇာရဲ႕ဇတ္လမ္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ကိုေျပာျပရမယ္ဆိုရင္ မယ္ဒူဇာဟာ အလြန္လွပတဲ့နတ္ဘုရားမျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူနဲ႔မ်က္လုံးျခ င္းဆုံမိတဲ့သူကို ေက်ာက္႐ုပ္ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ မယ္ဒူဇာကိုသတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ နတ္ဘုရားတပိုင္းလူတစ္ပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဂရိသူရဲေကာင္း ပါးစီးယပ္စ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သူအေၾကာင္း ႐ိုက္ထားတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတလည္းရွိပါတယ္။ မယ္ဒူဇာရဲ႕ေသြးေတဟာ အာဖရိကတိုက္ကို စီးဆင္းသြားတ ယ္လိူ႔လည္း ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီေရကန္ဟာ အရင္က အနီေရာင္ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ NASA ရဲ႕ၿဂိဳလ္တုနဲ႔ဖမ္းမိၿပီး ေျပာျပခ်က္အရကေတာ့ ဒီေရကန္ဟာ ေနာက္ပိုင္းမွ အနီေရာင္ျဖစ္ကို ေျပာင္း … Read more
မတည့်တာကိုမှ စားချင်တယ် စားပြီးရင် တခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒါလေးမှတ်ထားနော် မတည့်တာကိုမှ စားချင်သူများအတွက် အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားနည်းများ ၁။ လက်ဖက်ကို အမြဲနိုင်တာ လျှက်ဆားဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေ၊ လေပွ၊ ရင်ပြည့်ရင်ကယ် မဖြစ်အောင် လက်ဖက်သုပ် စားပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာရင် လျှက်ဆား၊ ကိုးပါးဆေး၊ မဟာဖြေဆေး စတဲ့ လေနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဗမာဆေးတစ်ခုခုကို အနည်းငယ် လျှက်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ ၂။ လက်ဖက်သုပ်၊ ဂျင်းသုပ် စတဲ့ အသုပ်စုံတို့ကို စားတဲ့အခါ ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်း ကိုက်လေ့ရှိကြတယ်။ တစ်ချို့ က ပါးစပ်နံမှာစိုးရိမ်ပြီး စားချင်လျှက်နဲ့ မစားဘူး။ ဘာမှမပူနဲ့ စားသာစား။ မစားခင်လေးမှာ မြေပဲစေ့ ၄၊ ၅ စေ့ကိုသာ အရင်ဖယ်ထား။ စားပြီးတာနဲ့ … Read more
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား?
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ … အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုးထားတတ်တယ်။ လူချစ်လူခင်ပေါသလို မနာလိုသူလည်း ပေါများတယ် ရည်ရွယ်ချက်ကြီးတယ် လုပ်ချင်တာကို ကြိုးစားလုပ်တတ်တယ်။ ပေးကမ်းလိုစိတ်ရှိတယ်။ မရှိ ရှိတာ လှူ ဒါန်းတတ်တယ်။ ချစ်သူကိုဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်။ ချစ်ပြီဆို ဘယ်လိုတားတား ဇွတ်ချစ်တယ် မုန်းပြီးဆို လုံးဝလှည့်မကြည့်ဘူး။ စကားပြောတည်တယ် ခင်သွားရင် ပေါတောတောလုပ်တတ်တယ်။ အိမ်မှာ ဘုရင် အပေါင်းအသင်းကြား သူမပါမပြီး။ သူများအားမကိုးတတ်ဘူး အကူအညီယူပြီးရင်လည်း ကျေးဇူးဆပ်ဖို့မမေ့တတ်ဘူး။ crd Unicode ခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကိုဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူဟာ … အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီး ခံစားလွယ်တယ်။ … Read more
သင့်ကို အမြဲလှနေစေမည့် လျှို့ဝှက်ချက် (​၁၀၀ )…
သင့်ကို အမြဲလှနေစေမည့် လျှို့ဝှက်ချက် ၁၀၀ မိိန်းခလေးမှန်ရင်သိိမ်းထားပါ 1.မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မယ်ဆိို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ 2.မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့ 3.မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ 4.မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာသန့်စင်ပါ မိတ်ကပ် က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တစ်ခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက် ပါဘူး 5.မိတ်ကပ်ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover သုံးပြီးသန့်စင်ပြီးမှ မျက်နှာသစ်ပါ 6.မိိတ်ကပ် remover ကို အလေအလွင့်နည်းအောင် ယနေ့ခေတ် အသုံးများလာကြတဲ့ ready made ဂွမ်းလေးတွေ သုံးပြီး ဖျက်ပါ 7.ဘူးအသန့်တစ်လုံး သို့မဟုတ် လေလုံအိတ်တစ်လုံးထဲကို ဂွမ်း အရွက် ၂ဝခန့်ထည့်ပါ ပြီးရင် make up remover အရည် နဲနဲလောင်းထည့်ပေးပါ … Read more
တစ္ႏွစ္တာကံျမင့္ေစမဲ့ ကန္စြန္းၫႊန္႔အိုး အစီအရင္
၁၃၈၃ခုနှစ်ကစလို့ တစ်နှစ်တာအတွင်းအဘက်ဘက်က အဆင်ပြေစေမယ့် နည်းလမ်းလေး ပြောပြချင်တာပါ။ ခေတ်စနစ် အရ လူတော်တော်များများအဆင်မပြေကြ ပါ။ ငွေကြေးရှိတဲ့သူအတွက် တောင့်ခံထားနိုင်ပေမယ့်။ လက်လုပ်လက်စား သမားအတွက်တော့ ဒီလိုကာလဟာ မထောင်းသာလှပေ။ ဒါကြောင့်ပဲ လွယ်ကူရှင်းလင်းပြီး ငွေအကုန်အကျ အနည်းဆုံးနဲ့တစ်နှစ်တာအဆင်ပြေမယ့်နည်းလမ်းလေးပြောပြထားတာ ပါ။ လိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ ကံကောင်းနေသူ တွေအတွက် ပိုကောင်းနိုင်ပြီး ကံညံ့နေသူအတွက် အသက်ရှူချောင်ပါလိမ့်မယ်။ တော်ရုံအညံ့အဆိုးတွေက ပိန်းကြာရွက်ပေါ်ရေမတင်သလို ကင်းစင်သွားပါလိမ့် မယ်။ နည်းလမ်းလေးစပြောပါ့မယ်။ ပထမဦးစွာ မြေအိုးတစ်လုံးဝယ်ပါ။ ပုံပါအတိုင်း အရွယ်အစားလောက်ဆို ရပါပြီ။ မြေအိုးပဲ ရမှာပါ။ မြေဓာတ် (ပထဝီဓာတ်)ကိုလိုချင်လို့ပါ။ အိုးကို အဖြူရောင် (သို့)ငွေရောင် ဆေးသုတ်ပါ။ ဆေးကို အခြောက်ခံပြီး တာနဲ့ အိုးထဲ သဲသန့်သန့်လက်တစ်ဆုပ်ခန့်ထည့်ပါ။ ထိုနောက် ရေထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကန်စွန်းညွှန့်လက်တစ်ဆုပ်ခန့် အိုးထဲထည့်ပါ။ ဒါဆိုရပါပြီ။ … Read more